Iindaba - Imigangatho yokukhethwa kwebhulorho ebunjiweyo yentsimbi
Umgangatho wokukhetha kwibhulorho ebunjiweyo yentsimbi
Ibhrashi yentsimbi yesinyithi yentsimbi ikwabizwa ngokuba yibhulorho yentsimbi, umendo ohamba phambili, isibiyeli esenziwe ngentsimbi, isibiyeli sesinyithi, isibiyeli sentsimbi, isibiyeli sokulwa nokungqubana, isibiyeli somgaqo wentsimbi, inkxaso yombhobho webhulorho.
Ukuqinisekisa umgangatho wolwakhiwo lwenkxaso yebhulorho, kunye nofakelo olufanelekileyo, uhlengahlengiso, ukujonga, kunye nokutshintsha inkxaso yebhulorho, nokuba yakhiwe ngendlela ye-beam okanye ngendlela ye-precast beam, akunamsebenzi loluphi uhlobo lwenkxaso yebhulorho efakiweyo, inkxaso yebhulorho efakwe kwi-pier. Kuyimfuneko ukuseta umqamelo oxhasayo ngaphezulu. Isibiyeli somgcini webhulorho sikwabizwa ngokuba yibhulorho kaloliwe yesinyithi, isibiyeli sentsimbi, isibiyeli somgcini wentsimbi, isibiyeli sesinyithi, isibiyeli sentsimbi, isibiyeli sentsimbi, isibiyeli sentsimbi, isibiyeli somgaqo wombhobho wentsimbi, umbhobho wesitimela sebhulorho inkxaso. Inkqubo yenkxaso yentsimbi: isanti yokubumba, iimveliso ezigqityiweyo, i-sandblasting, kunye nokupeyinta okugqityiweyo
Ngexesha lokwakhiwa kocingo lwentsimbi oluphoselweyo, amagcisa aya kujonga kwaye alungise ukusebenza ngokungekho mthethweni kwindawo yokwakha ngexesha. Beka phambili ii-odolo zokulungiswa komgangatho kunye nemilinganiselo yenguqu esemgangathweni yokuqinisekisa ukuba umgangatho weprojekthi uyahlangabezana neemfuno zoyilo kunye neenkcukacha zokwamkelwa.
Imigca yebhasi yokuzahlula wedwa:
Iindawo zokuzahlula kumacala omabini ebhasi zahlulwe kweminye imizila. Ucingo lwesahlulo sodwa: yindawo ekulula ukuhamba yodwa engenasiseko sangaphakathi somhlaba. Ucingo lokubekwa lodwa olungagungqiyo: Iindawo zokuzahlula ezingcwatyelweyo okanye ezenziwe kwangaphambili emhlabeni kwaye zilungiswe kunye.
Kufuneka kubekho imigca emibini engqameneyo yomda ongasentla nophantsi, ukwenzela ukuba iziphelo eziphezulu nezisezantsi zomqolo zigudle emva kofakelo. Xa sivelisa iilera zokubambelela ingca, kufuneka sifake imibala ngeendawo zokugcina ngokweemfuno zabathengi. Yeyiphi indlela eqhelekileyo yokufaka imibala? Okulandelayo, makhe sazise i-lawn guardrail mveliso. Ngokwaziswa komvelisi wokhuseleko lwengca, iindlela zombala ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zezi: ukutshiza umphezulu: ngokufanayo tshiza umbala okhethiweyo kwibala elibonakalayo kumgangatho obonakalayo we-PVC. Ingafafazwa kwicala elinye okanye kumacala omabini. Ukwahluka kwemibala, ukuguquguquka kunye nemveliso efanelekileyo. Indlela ye-extrusion yeprofayile emnyama: Yongeza i-masterbatch yombala kwifomula yeprofayile ye-PVC, kwaye ukhuphe iprofayile emnyama ngokusebenzisa i-extruder.
Xa ufaka ucingo lwe-iron cast, nikela ingqalelo ekuphunyezweni ngokungqongqo kwemigangatho yobunjineli. Uhlobo, imigaqo, imodeli, kunye nobungqingqwa bentsimbi yokubiyela kufuneka ihlangane neemfuno zobunjineli kunye noyilo. Ezi welds zenziwe nge welding ngokupheleleyo kwaye zicocekile kakuhle. Intle, ubungakanani bemveliso buchanekile, imveliso ithe tyaba kwaye ime nkqo, kwaye iyahlangabezana neemfuno zoyilo kunye nemigangatho yokwamkelwa.
Isibiyeli sikalinda sisixhobo sodwa esetyenziselwa ukuvala omabini amacala emgceni ukunqanda abantu, izilwanyana kunye neemoto ezingezizo iimoto ukuba zingene kuhola wendlela. Inesakhono sokufumana ukungqubana kwamandla, ukunyanzela izithuthi ezingalawulekiyo ukuba zitshintshe indlela kwaye ziyibuyisele kwicala lokuqala lokuqhuba, ukuthintela Inefuthe lokuphuma endleleni okanye lokuwela phantsi kwebhulorho. Ngokweempawu zayo zoomatshini, i-guardrail inokwahlulahlulwa ibe ziintlobo ezintathu: i-guardrail engqongqo, i-guardrail engqongqo kunye ne-guardrail eguqukayo. Indawo yokulwa ukungqubana kwezithuthi, njengesixhobo esifunekayo sendlela yokuhamba, inefuthe elithile kukhuseleko lokuqhuba ngesantya esiphezulu, ukuthuthuzela ukuqhuba, indawo yokubonisa indlela, kunye neendleko zobunjineli. Ke ngoko, xa sisakha ii-expressways, kufuneka siwaqonde ngokupheleleyo amacandelo oonogada abangqubanayo. Iimpawu zibandakanya indlela yokulwa ukungqubana, indleko zeprojekthi, ukwakhiwa ngokulula, iindleko zokugcina, amaziko okulwa ilitha, kunye noqwalaselo lombhobho wokunxibelelana.
Ibhulorho anti-ungqubano isibiyeli somgcini senziwe ngentsimbi yentsimbi njengempahla eluhlaza. Yenziwe yisanti ekubunjweni-ukulahlwa-kwemveliso egqityiweyo esekwe kwimveliso yentlabathi-yokupeyinta. Ngokubanzi, iibhlorho ezinkulu kakhulu, iibhlorho kunye neebhulorho eziphakathi ezinje ngee -wayways kunye noohola bendlela bakwinqanaba lokuqala kufuneka zingenamiqathango. Isibiyeli sentsimbi sikhusela isibiyeli sifakwe emhlabeni; isibiyeli castrail isibiyeli ukukhanya ubunzima, ngamaxabiso asezantsi, lula ukuthuthwa, ufakelo, ukugcinwa kunye nokugcinwa; Ke ngoko, uluhlu lokusetyenziswa kobushushu lubanzi. Ngophuhliso lwezothutho, ngakumbi oohola bendlela ngokubanzi, oohola bendlela, kunye neebhlorho ezinkulu neziphakathi zifuna ukhuseleko lokuqhuba ngesantya esiphezulu, ukuqhuba ukuthuthuzela, indawo yokuhola uhola wendlela, iindleko zobunjineli, njl. inkqubo yokuvelisa. Yila umgadi wentsimbi Iindidi ezintathu zezibiyeli kunye nabakaki bentsimbi. Kukho izinto ezininzi ezichaziweyo kunye neemodeli zebhulorho zokubiyela, ukukhumbuza wonke umntu ukuba anike ingqalelo xa ukhetha iibhulorho zendlela: ukuba ibhulorho enkulu okanye ephakathi, unokukhetha uhlobo olufanayo lwe-guardrail, olunokwandisa ubuhle bebhulorho; ukuba yintaba okanye indawo eneentaba, inokusetyenziswa. Idityanisiwe okanye umqadi uhlobo guardrail; xa sidibana neebhulorho zentsimbi, kuya kufuneka sikhethe intsimbi okanye i-alloy guardrails; xa udibana neebhulorho ezinde ngokukhethekileyo ezineebhulorho ezinkulu, kufanelekile ukuba unikele ingqalelo ekwamkelweni kohlobo olufanelekileyo.
Ibhulorho yokugada ibhekisa kumgaqo wokhuselo ofakwe kwibhulorho. Injongo yayo kukuthintela izithuthi ezingalawulekiyo ukuphuma ebhulorhweni, kunye nokuthintela izithuthi ukuba zingaphuli, zinqumle ngaphaya, zinqumle ibhulorho, kwaye zihombise isakhiwo sebhulorho.
6. Imibhobho mm / m. I-deformation incinci phantsi kwefuthe lobushushu. Ukuqhutywa kwe-thermal kuncinci, kwaye ukusebenza okungahambisani nokubanda kubhetele kunokubhobhoza imibhobho yentsimbi.
Inkampani ivelisa ikakhulu iintlobo ezahlukeneyo zebhulorho yentsimbi yokuhambisa umbhobho, ikakhulu ejongene namanzi emvula kunye nomgwaqo omkhulu. Umbhobho wokuhambisa umbhobho wentsimbi ngumbhobho wensimbi ongaphandle owenziwe ngentsimbi exineneyo kunye nezinye izongezo. Ngokweemfuno ezahlukeneyo zokuhambisa amanzi, ububanzi bangaphakathi bomngxunya wombhobho bunokwahlulahlulwa ubengu-0.10m-0.15m, kwaye isiphelo esisezantsi sombhobho kufuneka sandise ubuncinci i-0.15 ngaphantsi komphezulu wendlela. -0.20m, ukuthintela i-seepage kunye nokumanzisa umphezulu weembambo eziphambili, ubukhulu bemingxunya yombhobho inokwahlulwa ibe yi-10mm * 1mm-30mm * 3mm, kwaye zinokuhanjiswa ngokulinganayo kuluhlu lwama-360 degrees , Iidigri ezingama-270, iidigri ezili-180, kunye nezingama-90. Isetyenziswa ngokubanzi kumacandelo okuhambisa amanzi afana noohola bendlela, iindlela zikaloliwe, iiprojekthi zikaloliwe, inkunkuma, iitonela, amabhanti aluhlaza, amabala ezemidlalo kunye nokukhuselwa kwethambeka okubangelwa ngumxholo wamanzi aphezulu, kunye negadi yezolimo kunye nokunkcenkceshela komhlaba kunye neenkqubo zokuhambisa amanzi. Ngokudibeneyo nemibhobho ethambileyo engenayo kunye neplastiki eyimfama eyimfama, iye yaba zezona mveliso zintathu ziphambili kulwakhiwo lobunjineli (umjelo wamanzi kunye nephepha lamanzi) kwilizwe lam.
1. Ukhuseleko lwamanzi:
I-orifice ibekwe kumkhombe wamaza. Ngenxa yesenzo esiphindwe kabini sentshukumo yamaza kunye nelaphu lokucoca ulwelo, i-orifice ayilulanga ukufakwa, eqinisekisa ukuhamba ngokutyibilikayo kwenkqubo evumayo.
Ukudityaniswa kwendalo yamandla kunye nokuguquguquka:
Ubume obunqabileyo obunamacandelo obuncinci buphucula ngokufanelekileyo uxinzelelo lwangaphandle lwemveliso, kwaye inkqubo yokuhambisa amanzi ayiyi kukhubazeka ngcinezelo lwangaphandle oluchaphazela umphumo wokukhutshwa kwamanzi.
Ukukhethwa kwebhulorho yohlobo lwe-guardrail kufuneka kuqala kumisele inqanaba lokuchasana nokungqubana ngokwendlela yendlela, ngokubanzi kuthathelwa ingqalelo ukhuseleko, ulungelelwaniso, iimpawu zento ekufuneka ikhuselwe, kunye neemeko zejiyometri yesiza, emva koko ngokokuma kwayo, uqoqosho, ulwakhiwo nolondolozo. Izinto ezinjengokhetho lwefomathi yolwakhiwo. Indlela yokushumeka ibandakanya iindlela ezintathu: ikholamu ebethelelwe ngokuthe ngqo, uhlobo loqhagamshelo lweflange, kunye nebhulorho yokhuseleko kunye nomgangatho webhulorho ugalelwa emzimbeni omnye ngemivalo yentsimbi ehambisa amandla. Xa iimeko zivuma, i-guardrail engasuswayo inokusetyenziswa.
Kucingo olubiyele, Ukunyathela iPosti, Ucingo lwegadi, Handrail Tube, Iphepha leSinyithi, Ukuhonjiswa kweeGates zentsimbi,